Mila vokatra ? | NewsMada
Velombolo ireo izay nitsidika ny foara Fier-Mada teny Andohatapenaka, sy naheno ihany koa ny kabary nifandimbiasana. Tsara ny vokatra, misy ny fitaovana, miasa ny teknisianina ary misy koa ny mpamatsy vola. Amin’ny maha foara azy, ny vokatra tsara avokoa no tena haranty ao. Miendrika fampilendalendana mba hanentanana ny rehetra hitodika amin’ny sehatry ny fambolena izany.
Ho an’ny fambolena manokana, anisan’ireo fototry ny toekarena eto Madagasikara io. Efa an-taona maro no nitadiavana sy nampiharana politika marolafy hampiroboroboana azy, saingy tsy mety tena misongadina izany. Inona ny antony? Inona ny olana? Any ifotony sa eny an-dalana? Ny lalam-bokatra ve no mikatso?
Betsaka ny fanontaniana azo apetraka. Misy ary maro ny miezaka hanatsarana ny seha-pihariana fambolena. Efa fantatra ela ny olana eo amin’ny lalam-bokatra. Misy aza toa iniana tsy itadiavana vahaolana, ho an’ny tombotsoan’ny olom-bitsy…
Fandre matetika ny hoe “ny tantsaha no mijaly, voambaka…”. Antony lehibe mampihena ny vokatra izay olana ifotony izay. Olana amin’ny olona izay, fa misy koa ny olana amin’ny tany. Ny tany no tena fototra, ary ny tany no manome ny vokatra. Tany aiza no hambolena? Aiza sy an’iza no hihariana?
Olana fototra tsy azo tsinontsinoavina ny resaka tany, indrindra any amin’ny tontolo ambanivohitra. Feno mantsy ny Renivohitra ka mikisaka mankany izao ny olan’ny fananan-tany. Firifiry ny fitarainana heno, mahakasika ny aditany? Ny Fakana tanin’olona? Ny tsy fahafantarana hoe tanin’olona ny nohajariana an-taony maro?
Raha mila vokatra tsara kokoa, hampisongadina ny toekarena. Misy ireo olana fototra mianjady amin’ny mpamokatra. Tsy ny masomboly, fitaovana manara-penitra ary lalam-barotra ihany ireo.